Ogaden News Agency (ONA) – 10ka December waa Maalinta Xuquuqul Insaanka Caalamka – World Human Rights Day
10ka December waa Maalinta Xuquuqul Insaanka Caalamka – World Human Rights Day
Posted by ONA Admin	/ December 10, 2012
Shaanbal Faysal Maxumad C/wali
Dhibaatooyinka Murugada leh ee ka dhaca Ogadenia.
Ogadenia waxa ka jira dhibaatooyin murugo leh oo salka ku haya gumaad laguna gumaado bulshada ra’yidka ah. Dhibaatooyinkan oo ka dhan ah Xuquuqul insaanka. Gumaadkani waxa uu ugu darnaa Xilligii la aasaasay ciidamada Lyuu Policeka ah. Iyada oo ay jirtay mudadii 3da sano ahaa ee ugu horaysay ee la aas-aasay in ay Lyuu-Police-ku Gumaadeen bulsho gaadhaysa ilaa 10,000 oo ruux oo ra’yid ah loona dilay iyaga oo loo aanaynayo in ay yihiin taageerayaal ONLF. Dadkan inta ugu badan waxa lagu go’maaday gobalka fiiq iyo dag-mooyinkiisa. Danood, Gobalka Wardheer iyo baadiyaheeda, Nus-dariiq iyo aga’gaarkeeda,Gobalka dhagax-buur, Qabri-dahar iyo dag-mooyinkeeda iyo baadiyaha oo ah meel ayna arki karin dadka magaalooyinka jooga.
Sababaha keenay dadkan in la gumaado
Itoobiya waxa ay goosatay in ay gumaado dhammaan cid kasta oo ay ONLF taageero iyo dhaqaale ka heli karto iyo in ay cabsi galiso bulshada gaar ahaan dhalinta ku biiri karta xoogaga ONLF.
Aas-aaskii ciidanka lyuu policeka
Ciidankan waxa la aas-aasay 2005tii,waxaana loo aas-aasay in lagu xakameeyo laguna cabiidiyo bulshada Soomaaliyeed ee Reer-Ogadenia.
Fikradaha lagu aas-aasay waxa is ka lahaa Cabdi Maxamuud Cumar (Abdi Ubbo) Iyo Daa’uud Maxamed Cali (Daa’uud Axmaar). Cabdi Ubbo,markaas waxa uu ahaa Hogaanka Nabad Galiyada ee Dawlad is ku sheegta ee ay riyada ku jirta. Cabdi Iley, Cabdi UBBO waxa uu Baarlamaankii Dowlad is ku sheegta ahay ka codsaday in ay ansixiyaan fikradiisa oo ah in uu abuurayo Ciidan ladagaalama ONLF oo dagaanka laga sameeyo.Waxa khilaafay Xubno ka mid ah Maarlamaanka ka dib waxa loo taxaabay Xabsiga.
Intii kale waxa ay ansixiyeen fikirkii Cabdi Iley iyo Daa’uud Axmaar fikradoodii waxa ay la hoos-tageen Daalimkii bakhtiyay ee Meles Zenawi aad ayuuna u la dhacay fikirkooda wuuna u ansaxiyay ciidankaas gumaadaya bulshada Soomaaliyeed. 90% Zenawi fikirkiisa siyaasadeed waxa uu ku jaangooyay Ogadenia. Maadaama oo uu helay dameero uu rarto oo uu ku adeegto wuu u meel mariyay fikirkoodii.
Waxaa taba-baro loo furay Ciidan la yidhaahdo Lyuu Police.
7dii Todabadii Regimenti ee ugu horaysay Lyuu Police-ka markii ay taba-barkii dhamaysteen ee loo soo xidhay Cabdi Iley waxa uu cabdi Ubbo ku la galay hool si qarsoodi ah.Waxa uuna u sheegay Lyuu Police-ka in loo sameeyay in ay la dagaalamaan ONLF iyo ciddii ku lug-leh ba.
Ciidankan waxa uu u badnaa dhalin yaro da’doodu u dhaxayso 18 ilaa 20 jiro.
Balse horjoogayaashu waxa ay ahaayeen kuwo da’doodu u dhaxayso 25-30 jiro.
Dhalintan ay ciidamaysteen waxa ay ahaayeen dhalin aan aqoonta maadiga ahj lahayn oo aan garanaynin xaqa wadankiisu ku leeyahay iyo xuquuqka nafta muwaadinka ah.
Qud-booyinkii Cabdi Iley u sheegay Ciidanka Lyuu Police-ka ah waxa ay ahayd in ay dumarka ku hanuuniyaan kufsi iyo xoog raggana Xabad iyo marjin.
Hawl-galadii ugu horeeyay ee 7dan Regiments:
Waxa ay ka bilaabeen Gobalka Fiiq,dagnooyinka Xamaro,Sagag,Dhuxun.
Waxa ayna ku gumaadeen dad aad u fara-badan oo shacab ah oo ay ku eedeeyeen SEEL taageerayaal ONLF.
Dadkaas inta badan waxa lagu laayay marjin luqunta xadhig laga sudhay,gab-dhahana way kufsan jireen inta ayna qudha kaga jarin ka hor-taas oo ahayd dar-daarankii Cabdi-Ubbo
Gumaadkii ay gaysteen 7dan Regiments
Waxa ay si khalad ah oo bini’aadminimoda ka baxsan u gumaadeen dhalintii lagu gumaaday Dhuxun,wiilashii iyo gabdhihii lagu gumaaday xamaro wiilashii iyo gabdhihii lagu gumaaday Xamaro iyo dhalintii galu bireeyay Dhagax-buur iyo kuwii lagu xasuuqay dhanaan iyo kuwii lagu xasuuqay Daakhato.
Waxa aan goobjoog ka ahayn markii Lyuu Police-ka la badiyay Gu’maadyo tiro lahayn oo la gaystay.
Hadda ba Gumaadkan waxa Masuu’l ka aha Itooyiba waxana u fuliyay Gacan yaraheeda Cabdi Iley iyo Daa’uud Axmaar.
Kuwa badu cuntay iyaga unbaa ka jawaabi doona hadda ciiddii damiir laheey in ay shacabkaagii gumaadeen dadka noocaas ah.
In sharciga la la tiigsado ayay u baahan yihiid dhiig yacabkan anigu waxa aan markhaati ka ahay goobkastana ka cadaynayaa gumaadkii dhacay aniga oo ah SHAANBAL FAYSAL MAXAMUUD C/WALI (SHAANBAL GIRIIG)
Xilligii la kordhiyay Lyuu policeka
Dhac-dooyinkii aan indhahayaga ku aragnay xilligii la kor-dhiyay Lyuu Police-ka.
Waxa Lyuu Police-ka loo qaybiyay si is ku dhaf ah iyada oo 7-da Regimenti oo uu xayl kasta ama horin kasta lagu daray regimenti cusub si ay kuwan cusubi uga helaan khibrad.
Khibradii ciidankiii hore ku shaqayn jiray,ama qorshihii 7-dan regimenti ee ku caan baxay gu’baadka bulshada Cabdi Ubbona u la baxay qab-jabiyaashii ONLF.
7-daasi regimenti,shakhsi ahaan anigu waxa aan ka mid noqday regimentiga 9-aad ee Degmeda Dhuxun kana hawl-gali jiray dhammaan tuulooyinka Deg-mada dhuxun iyo buuraha qarri-jiqood.
Maalin maal maha ka mid ah Tuulada Cayuun waxa laga soo qabtay 4 carruur ah oo da’doodu tahay 12,13,14 oo wallaalo ah kuwaa soo lagu eedeeyey in ay yihiin ONLF.Ka bacdi horjoogayaashii waxa aan u sheegay, aniga oo shaanbal Faysal ah, in ayna carruurtan siyaasad xanbaari karin,Nasiib darro carruurtii waa la marjiyay,waxa Marjiyay Shiihalaqe Nus-dariiq oo ku caan baxay in uu umada gumaado
Dilkii layaabka lahaa
Waxaa gabadh curyaan ah degmada xamaro lagu eedeeyey inay tahay khasnajiga ONLF sida runtu ahaydna gabadhaasi waxay la a,ayd labada lugood iyadaa ubaahnayad wax u kaalmeeya nasiib daro waxaa luqunta laga galiyey xadhig waxuu cidankaasi ahaa regmentiga kobaad hurinta 2aad amrka waxaa iska lahaa CLKAAFIoo shaalaqe hada ka ah regmentiga 12aad ee Garbo degan cabdi ilaay cabdi ubbo waxaa uu inbada ku baraa rujiye ciidanaka inuu askariga marjiyey gbadhaasi inuu qabtay shaqo fiican tani waamid aan markhaati ka ahay.
Tirada ku buuxi gumaadka shaatiga loo xidhay ee ku dhaca bulshada
Waxaa gumaad naxa riis daro ahi ku dhacaa bulshada reer guuraga ah tusale marka ciidanka Lyuu polisku hawlgal ku jiro oo ay yool ama target onlf tu fadhido cidanka Lyuu poolisku waxay u kaxeeyan cid kasta oo ay arkaan iyagoo diidan in cidaasi ka war bixiso oo digninsiiso ONLFTA meesha ay joogto sidaas awgeed marka ay gaadhaan goobtaasi ee xabadi dhex marto onlfta iyo LYUU POLISKA waxay xabada marsiiyaan shacabkii ay wateen iyagoo tira onlfta ka dhimata ku buuxiya shacka ay laayeen.
Tusaale hawlgalkii DAAKHATO ee ay wada sodeen 3da regmenti ee 9,5,17 ee uu hojoogaha ka aahaa shii alaqe Tiliqow ee lagu dilay 43 qof ee shacab ka ahaa ee lagu buuxiyey tiradii ka dhimatay ONLFta. Hadaba dumigu ma yara hala ogaado isla gobta hawlgal ka horeeyey Shii alaqe Dhegowayne oo watay regemntiyada 9,4,12 waxaa uu goobtaas ku gumaaday shacab dhan 148 ruux oo shacab ah.
Dhacdooyinka yaabka leh ee Liyuu polisaka
Liyuu poliska gabadhii somaliyeed ee quru badani waxaa iska leh iyoaga hadii ay diido wxaa lagu edeeyaa inay tahay taageere onlf ka dina way dilaan. Waxaad arkaysaa nin shacab ah oo xaaskiisu qurux badantahay oo ay ka furanayaan hadii uu diido ninka qaba xaskaasi isaga iyo iyadaba waxay ku eedeeyaan taageero ONLF kabacdin way marjiyaan.
Jidh dilka ku dhacay reer Guraaga ah
Maadama ay LYuu poolisku yihiin waxa magarato yihiina cidanka lugta cidkasta oo reerguraa ga ka mida ahoo ay arkaan waxay u jidh dilaan si naxriis daro ah iya goo ka baadi goobaya xogta onlfta
Askariyeynta khasabka ah ee dhalinta loo geysto
Dowlad isku sheegtu waxay odayaalkasta oo wabiil u dirtaa dhalinyaro la askariyeeyo marka ay keenaan cunugii diida ee ka carara waxaa raadiya oo soo qabta lyuu booliska ka bacidi intay qori u dhiiban ayey ku khsbaan inuu dilo qof qoyskooda ah oo lagu eedeeyey onlfta ,ka bacdi ilma haasi kama dhex baxayo cidanaka lyuu booliska ama maleesiyaanka inta badan qofka maeleesyaan markuu 2sano ahaado ayaa loo bedelaa lyuupolis in loo tababaro.
Xusus qoraalkii hore akhristow sidookale waxaa uu xasuuq ka dhacay ay gaysteen Liyuu polisku tuulada Gudhis laguna dilay 125 qof oo shacab ah xilgaasna waaba la gubay Gudhis Galaalshe sidoo kale xasuuq ayaa ka dhacay tulada daara salaam sidoo kale.
sidoo kale xasuuq ayaa ka dhacay Dagmada Qoriile oo ku taala Wardheer.
Gaar ahaan Danood.
QOYSASKA LA MOORA DUUGAY
Lyuu Police-ku waxa ay sameeyaan qorshe ay uga dhacaan, shakhsiga ONLF-ta Noqda iyaga oo qoyskii uu ka dhashay inta ay raadiyaan ayay xoolaha ka dhacaan oo ay Mooraduugaan. Xoolahaasna waxa ay la aadaan xeryahooda oo ay ku qashaan.
Sidoo kale waxa ay ka xaystaan Xaaska shaqsiga ONLF ku jira. Waxa ay kaxaystaan shaqsiga xubin ONLF-ta noqday si uu u soo xaroodo oo uu u yimaado goobta xaaskiisa la geeyay.
QOYSASKA REER-GUURAAGA AH EE LA’ ROGAY
Waxa jirta qoysas rogmaday,oo aysan cidi ka warhaynin oo xitaa uusan ka hadhin hal ilmood. Qoysaskani waa Reerguuraaga ee dhaqda xoolaha Geela iyo adhiga ee degen baadiyaha fog-fog. Ciidanka Lyuu Police-ka ah oo hawl-gal ku jira in uu gabalku ugu dhaco qoys Reer-Guuraa ah agtiisa inta xilliga makhribka ah ayay aalaa is ku soo beegaan. Kadib waxay muskii ama oodii qoyskaas in ay ka xidhaan dhufays iyada oo laga yaabo marka xooluhu soo xaroodaan in ay qoyskii yimaadaan kooxONLF ah oo socday.Halkaasna xabadi ka bilaabmato sidaasna qoyskii iyo xoolihii halkaas ku moora duugmaan. Arintan oo arin khatar ah is la markaana ayna cidi ka war hayn. Waxa aan u sheegaynaa Ummada u dhalatay Dalka Ogadenia ee Qurbaha Joogta tani in ay dhacday mudo badan oo how iyo laba toona ahayn.
Riyada beenta ah ee Cabdi ubbo iyo tv-ga qudhun wada
Annagu waxa aan ka tirsanayn Ciidanka Lyuu Policeka. Waxa aan lugtayada ku marnay dhammaan deegaanka Ogadenia. Waxa aan u sheegaynaa ummadda qurbajoogta ah iyo kuwa dalka dibadiisa jooga ee u dhalatay Deegaanka Ogadenia.In ayna Ogadenia ayn Magaalada Jigjiga oo kaliya balse ay jiraan Gobalo, dagmooyin,iyo tuulooyin bulsho badana ay ku nooshahay hadda ba mar ka laga hadlayo wax qabad goor ma ayuu u qabtay Cabdi Ubbo Umada dhulka aan lugta ku marnay oon ayaa dadku u dhintay oo biyo ma laha tusaale haddaan u soo qaato Dhuxun halkaas oo aan joogay afar sano ma laha ceel.Xoolo dhaqatadu waxa ay maax-sadaan dooxa dhuxun.
Hooyooyinka ku nool dhuxun gudaheeda,waxa ay u kacaan si ay biyo u helaan 9ka habeenimo.Ka dib marka ay geelaydu ka tagto.Hooyadu waxa laga yaabaa in ay maaxsato 2 jeerigaan oo biyo ah is la markaasna ay Ciidanka Lyuu Police-ku ka qaataan biyahaas ay xalay oo dhan u soo jeeday.
Bulshooy ogaada xaqiiqadu in ay tahay sidaas,balse TV-Ga Qudhun wada waxa aad ka daawanaysaan ee la idin ka tusayo waa been la dhoob-dhoobay.
Dhibaatooyinka callool xumada leh ee xasuuqani keenay:
Callool xumada gumaadkan loo gaysanayo bulshada waxa ay keentay in dhalin yaradii ay waxa dhimato oo la wada laayay.Qaybina ay ba dalkii ka carartay oo ay mareen dalalka badaha leh tiro badan oo ka mid ah dhalinta ay baduhu cunee. Qaybina xabad iyo marjin lagu dilay.
Habba Su’aal? :
Waxa is waydiin u baahan ku ma ayaa umadan gumaaday? :
Qof-ka loo qabsan ee laga la xisaabtami waa KUMA? Yaa is ka lahaaa amarka iyo fikirka lagu gumaaday Ummadan? Goor ma ayaa la heli doonaa ciddii ka la xisaab tami lahayd? Goorma ayaa laga xisaabtami doonaa?
Maxay tahay “shaambal” må darajooyinka Gumaysigu bixyaa miseren Waa magac? Qoraalku wuu fiicannahay laakiin Qofka Magac uu wato må Maxay tahay?
Waa nin in badan ku jiray Lyuu Police-ka haddana sida ka muuqata qoraalka go’aan saday in uu dadkiisa wax la qaysado in ay kuwa kale ay ku daydaan ayaan rajayn lahaa. Magaca waa mid lagu garan.
shaanbalfaysal maxudclwali says:
walal shaanbal waadarajo laakiin nin xun oo umadiisa hasanow walaal
FIKIRKEED KA HAYSATAA QODOBKA 39 EE DOWLAD GUMAYSTAHA
waxaa uu ka hadlaa ayo ka talin ilaa heer go,itaan lakiin waa goorma ,
maxaa se laga wadaa sodeed u fahantay su, aashan ama qodobkani
a) waa marka dhamaan qowmiyadaha ethiopia afti laga qado ok amxaro iyo tigree afti laii waydiinayaa maxay tahay
b) waa ina dowlad deegaaanka go, ayaa gaadho istaraateejiyad dhaqaale siyaasadeed isla markaasna dhaqaale u celiyo dowlada dhexe ee gumaystaha ethiopia
c0 waa in dowlad deeganaka go ayaa gaadho istra teejiyad dhanka ciidanka iyo siyaasadeed iwm
hadaba siyaasad ahaan akhristo mid la aqbali karo matahay am la ogo lan karo
please fikirkaaga iga soo jawaab
face book axmed clwali
SHAANBAL FAYSAL MAX,UD Clwali says:
xusuus deegaanka ogadeenya ma itobiyaa mise _______ waa degaan____iyadoo ayjitray soo jireen taariikhi ah ogadenya waxay itobiya ku birta oo gumaysigii ingirsku ku daray itobiya 1954tii hadaba akhrite yaasha akhrista qoralada xanuunka badani ee siyyaasadeed fikirkayka qabaaial soo xidhidha akhristow
QODOBKA 16aad EE DOWLADA GUMAYSTAHA FIKIRKEED KA QABTAA
waxaa uu dhanaya qofna , qof muwadin ahi lgaama xayuubinkaro xuquuqda natiisa macnaha lama dili karo ila sarcigu xeeriyo moyee mxay tahya sababata bulshada loogu gumado tuhunka onlf nimo?
hadaba hadii doladnimo dhab aihi jirto ma sharci jiro oo dimuqradiyada ahi maxa loo dhawri waayey shurucda u degan xuqquuqul isaaan ka soo ururi dolada jirta waa mid u adeegta gumaystaha itoobiya
SHAAMBAL FAYSAL MAX'UD says:
walaalayaal maadaama website kiinu aan xiriir la leeyahay waxaan jeclaan lahaa inaad isiisaan ciwaan gaar ah oo aan idinkala soo xiriiro waxaan maadaama boggan uu yahay mid Public ah waxaan rajeynayaa inaad ciwaan iisoo diridoontaan xiriirkeenuna wuxuu noqondoonaa mid intan ka wanaagsan waxaana isiin soo gudbin doonaa xogta aan idin sii yay mid taya badan